Ciidanka Cirka Soomaaliya - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Ciidamada Cirka Soomaaliyeed)
Ciidamada Cirka Soomaaliyeed (SAF) (), waa awooda ciidanka cirka oo ah qeyb ka tirsan Ciidanka Qalabka Sida ee wadanka Soomaaliya. Ciidanka cirku waxay masuul ka yihiin ilaalada hawada iyo cirka wadanka Soomaaliya. Markii wadanka Soomaaliya xoriyada qaatey 1960kii ayaa la aasaasay ciidanka cirka, waxaana hogaanka ciidankaas gacanta ku hayay duuliyihii ugu horeeyay Cali Mataan Xaashi. Si kastaba ha ahaatee, Ciidanka Cirka Soomaaliya waxay wakhti ahaayeen kuwa ugu awooda badan Geeska Afrika. Burburkii wadanka 1990kii ayaa burburisay ciidankaasi; waxaase dib-loo soo nooleeyay sanadkii 2010.
Astaanta Ciidanka Cirka Soomaaliya
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed
Ciidanka Qalabka-Sida Soomaaliya
1960-1964 Dagaalkii xoraynta ogaden
1982 Dagaalkii labaad
Gen.Mohamoud Sheik Saciid
Cali Mataan Xaashi 1960-1978
3 Ciidanka Xooga Dalka
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya waa wasaarada maamusha dhamaan hay'adaha iyo waaxyaha aminiga qaranka, isla markaana gacanta ku haysa ciidanka qaranka wadanka Soomaaliya.
Ciidanka Xooga Dalka
Ciidanka Xooga Soomaaliya sido dowliga ah loo yaqaano Ciidanka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, waa Ciidanka Qalabka Sida ee wadanka Soomaaliya. Ciidanka xooga dalka waxaa hogaamiya madaxweynaha wadanka, waxayna masuul ka yihiin amniga, amaanka, jiritaanka iyo xoriyada, sharafta iyo kaladembeynta wadanka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciidanka_Cirka_Soomaaliya&oldid=193303"
Last edited on 9 Luuliyo 2019, at 08:04
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Luuliyo 2019, marka ee eheed 08:04.